WIFI Bluetooth Speakers Hidden Spy Camera - HD Night Vision Wireless 170 ° Video Recorder Real Time View (SPY227) | Xalka OMG
SPY227 - Telefoonada Bluetooth WIFI ee Hidden Spy Camera, 1080P HD Night Vision 170 ° Angle iyo Muuqaalka waqtiga dhabta ah
Kormeerka fog: Markaad ku xirto kamarad adigoo adeegsanaya router-gaaga adigoo adeegsanaya casrigaaga, kiniiniga ama iPad, waxaad ka fogeyn kartaa kormeerida gurigaaga ama dukaanka meelkasta oo aad ka shaqeyn kartid adigoo aan kaar lahayn SD. Waxay koontarooli kartaa qolkaaga, bakhaarada, dukaanka, ama xitaa caanahaaga, ee ammaankaaga iyo qoyskaaga.
Tani waa 1080P HD kamarad jilicsan, oo leh wada hadal wireless wireless ah; Afhayeenka iyo kamarad waxaa loo isticmaali karaa isla mar. 170-degree qiyaas ballaaran oo qulqulaya si ay u qoraan aragti ballaadhan.
Kamaradu waxay taageertaa kaadhka xusuusta illaa illaa 128 GB SD kaararka (kuma jiraan); waxaa sidoo kale lagu qori karaa duubista dhaqdhaqaaqa, duubista 24-saacad iyo duubista fiidiyowga waqti-gaaban. Waxa kale oo ay taageertaa duubitaanka wareegsan, marka marka SD ka buuxsamo, waxay si toos ah u duubi doontaa fiidiyow hore, mana aha inaad ka walwasho kartida kartida kaadhka; waxaad sidoo kale arki kartaa oo soo dejisan kartaa waxyaabaha kaararka video SD-ka iyada oo loo marayo APP.
Marka kamaraduhu ay dareemaan dhaqdhaqaaq, waxay kuu soo sheegi doonaan adoo isticmaalaya taleefanka APP (telefoonku wuxuu u baahan doonaa inuu ogeysiiyo hawsha ogeysiinta) oo si toos ah u qaadaya sawir iyo ku keydee albaabka sawirada gudaha APP. Waxaad sidoo kale sameeyn kartaa hirgelinta mooska si loo duubo fiidiyaha, kaas oo si toos ah loogu diiwaangelin doono kaarka SD. Dhinaca muraayada ayaa la timaada nalalka kulaylaha ee muuqaalka habeenkii, si loogu duubo habeenkii.
1. Kaliya taageerada shabakada 2.4 G, ma taageerto shabakadda 5G.
2. Badeecaddu ma qaado batteriyaal, fadlan ku xiro awoodda aad u isticmaasho.
Fiiri xagal: 170 degrees
Nooca cadaadiska leh: H.264
Wifi Qaadashada Dareemaha: 15-30m
Heerkulka Keydinta: -20-80 shahaadada jaamacadda
Heerkulka Operating: -10 Xigriika 60
Software Software: Ciyaaryahan Media / VLC Player
Nidaamka Nidaamka Kumbiyuutarka Windows / Mac OS X
Nidaamka Nidaamyada Gacanta: Android / iOS
Iftiin yar: 1LUX
Diiwaanka Cycle: 1-60 daqiiqo qayb ahaan
Taageerada Max. Awoodda: 128GB (kuma jiraan kaadh SD)
3267 Wadarta Views 2 Views Maanta